I-Freshmarketer: Hlaziya, Vivinya, futhi wenze ngezifiso ngale Suite Yokuguqula Ukusebenziseka | Martech Zone
NgoMgqibelo, Okthoba 3, 2020 NgoMgqibelo, Okthoba 3, 2020 Douglas Karr
Inani lomsebenzi elifakwa kuzakhiwo zedijithali nokuqukethwe okungashayeli empeleni kwebhizinisi kuyadida. Kuyakhathaza ngasohlangothini lwezinsizakalo embonini lapho amakhasimende azophikelela khona kuphrojekthi yokwethula isiza, ukuhlanganiswa, noma insizakalo… kepha-ke ngeke itshale ngesikhathi namandla okwenza ngcono ukusetshenziswa kwaleso siza.
Ukuthuthukisa yisizathu esiyinhloko esenza izinkampani zivame ukwehluleka ukubona ukubuya kwazo ekutshalweni kwemali. Njengomhlinzeki wesevisi, sigcizelela ukuthi ukwenza kahle kuyingxenye yenqubo yonke. Ngaphandle kwayo, inkampani ngeke iphumelele bese sizobhekana nesibopho sokuphendula… noma ngabe iklayenti lifuna ukuthi ukusebenza kube yingxenye yephrojekthi yonke. Asikwazi ukwenqaba wonke umuntu, kepha siyazama impela!
Izici zeSuite Yokuguqulwa Kwe-Freshmarker Yokusebenzisa
Yonga isikhathi sakho nemali ngokungaholi phakathi kwamathuluzi. Konke okudingayo ukuze uhlaziye, ukwenze kahle, futhi wenze ngezifiso iwebhusayithi yakho konke kukhona I-Freshmarketer.
Amamephu okushisa - Bona ngeso lengqondo umsebenzi wezivakashi kuwebhusayithi yakho. Khomba ukuchofoza, imiqulu ngesikhathi sangempela. Thola bese ulungisa izixhumanisi eziphukile, izithombe eziphazamisayo, nezinto zokwenza iwebhusayithi ezingenzi kahle.
Ukuqoshwa Kweseshini Yesivakashi nokuphinda Udlale - Bamba isipiliyoni sabavakashi bewebhusayithi yakho bese ubona ukuthi babambeka kuphi, yiziphi izigaba ezithandwa kakhulu, futhi lezo ezinganakiwe.
Hlukanisa Ukuhlolwa - Hlola ama-URL amaningi, ukuhlukahluka okuningi ukwenza izinguquko eziyinkimbinkimbi zokwakha kusayithi lakho, okungaholela ekuguqulweni okungcono futhi kwandise imali yakho.
Ukuhlolwa kwe-A / B - Qinisekisa imicabango yewebhusayithi ukukhomba ukuguqula amakhasi ewebhu angcono. Dala ukuhluka kalula ngesihleli se-WYSIWYG bese ulinganisa izinjongo zemali engenayo.
Ukwenza okuthandwa nguwe - Enza ngendlela oyifisayo okuhlangenwe nakho kwezivakashi zakho zewebhusayithi futhi uzikhuthaze ngobumnene ukuze ziguqule. Setha uphinde usebenzise isipiliyoni esenziwe ngezifiso ngaphandle kokubandakanya ithimba lakho lobuchwepheshe.
I-Form Analytics - Lungiselela amafomu akho ukukhiqiza ukuhola okuningi. Linganisa okukhishiwe, isikhathi sokungabaza, isilinganiso sokulungiswa, namanye amamethrikhi wokukhulisa nokuguqula izivakashi eziningi zibe imikhondo.
I-Funnel Analytics - Landela okwehliswayo kwezivakashi kuwebhusayithi yakho enamakhasi amaningi, bese ubona ukuthi lelo thuba lokuguqulwa liphuthelwe kuphi.
Amapholi nempendulo - Gcina izithameli zakho zibambe iqhaza futhi uzivimbele ekuphumeni kusayithi lakho ngokwenza imilayezo ngesikhathi esifanele.
Bhalisela i-Freshmarketer mahhala
Ukudalulwa: Ngingumuntu ohlangene we I-Freshmarketer's Conversion Optimization Suite.
Tags: ukusebenza kwesilinganiso sokuguqulwakhokhonewmarketer